‘रअ’ प्रमुखसंग गोप्यवार्ता : ‘भेटमा कुरा भएको हो, घाटमा हैन !’ आर्यघाट प्रवक्ता « Gajureal
‘रअ’ प्रमुखसंग गोप्यवार्ता : ‘भेटमा कुरा भएको हो, घाटमा हैन !’ आर्यघाट प्रवक्ता
प्रकाशित मिति: १० श्रावण २०७६, शुक्रबार ०४:२८
भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख गोयलको नेपाल यात्रा अहिले चर्चामा छ । चर्चा अनुसार, पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले दुतावासमै पुगेर गोयलस“ग ‘सत्य रस’ पिएका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले वालुवाटारमैं पुगेर आयल घसेकाछन् । भावी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झुपडीमै पुगेर घाम तापेका छन् ।
एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई भेट्नु सामान्य कुरा हो तर छिमेकी भेट्ने नाममा छिमेकी कि छोरी नै ताकि रहेको त छैन ? अविभावकले यो कुरो बुझ्न जरुरी छ । ‘रअ’ प्रमुखको नेता देउसीलाई पनि यही अर्थमा लिनुपर्ने गजुरीयल ठम्याई छ ।
सत्य के हो, प्रचण्डले बोलेका छैनन् । देउवाले खोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्री चुपचाप मस्त छन् । प्रवक्ता छोपछापमा ब्यस्त छन् ।
अहिले नखोजे कहिले खोज्ने, हामीले नगोदे कसले गोद्ने ! भारतका ‘गोयलहरु’ले हाम्रा ‘कोयलहरु’संग भेटघाट गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ? आ–आफ्नै डम्फु बज्दैछन् ।
गजुरीयल बिश्लेषण छ, भेट गर्न मिल्छ, घाटमा पुर्याउन मिल्दैन । अंध्यारो कुनामा गरिने भेटले स्वाधिनताको उज्यालोलाई घाटमा पुर्याउने खतरा हुन्छ ।
पत्रकार कुसुम भट्टराईका बुझाईमा प्रचण्डको भेट अमित शाहसंग, ओलीको मोदीसंग, देउवाको राहुल गान्धीसंग हुनुपर्थ्यो । प्रोटोकल मिचेर गोयललाई आयल घस्नुचाहीं अचम्मै छ !
अति गोप्य श्रोतले भनेको छ, ‘रअ’ प्रमुखले हाम्रा नेतालाई भेटेको सत्य हो तर एक शब्दपनि बोलचाल संवाद नभएको पनि सत्य हो । ‘अनि, बोल्दै नबोली छुटे त ?’ श्रोतको जवाफ थियो– ‘अहिले हाम्रा नेताको फेस रिडिङ्मात्रै गरे, केही दिनपछि ब्यवहारमा रिपोर्ट दिन्छन् । पर्खनोस् र हेर्नोस् ।’
Picture : telegraphnepal